JUNE&MAY: March 2013
သားနဲ့သမီးမွေးထားတာ အခုနဲနဲ အရွယ်လေးတွေရောက်လာတော့ မတူတဲ့စရိုက်လေးတွေကိုယ်စီရှိတာ
သတိထားမိတယ်။အရင်ဆုံးအစားသောက်မှာတင် ကွဲလွဲမှု့စတာပဲ။သားက ပေါင်မုန့်၊ချိစ်၊sausage တို့ဆို
အသေကြိုက် ပေမယ့် သမီးလေးကတော့ အဲဒါတွေမြင်ရင် နိုးပဲ။သူကကျတော့ ခေါက်ဆွဲသမား။ဆီချက်၊
ခေါက်ဆွဲကြော်၊ကော်ရည်၊ကြာဇံကြော် ကြိုက်တယ်။သား ကျတော့ အဲဒါတွေ လုံးဝ မကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့
မနက်စာ လုပ်ရတာ တော်တော်ခက်တယ်။၂ မျိုးလုပ်ရတယ်။အတူတူကြိုက်တာ တစ်ခုကတော့ ပဲပြုတ်
ထမင်းကြော်ပဲ။အက်ဝင်က အသီးအရွက်တွေကို ထမင်းနဲ့ကျွေးရင် မစားဘူး။သူ့ကို ထမင်းစာပြီးမှ အသီး
သပ်သပ် ကျွေးရတယ်။၀မ်းမချုပ်အောင်လို့။မေလင်းလင်းကျတော့ ထမင်းနဲ့အသီးအရွက်ရောကျွေးရင်
စားတယ်။အက်ဝင်က ရေအေး၊အအေး ကြိုက်တယ်။မေလင်းလင်းက အအေးမကြိုက်ဘူး။အက်ဝင်က
အသီးဆိုရင် စတော်ဘယ်ရီ၊ဘလူးဘယ်ရီသီး၊ကြက်မောက်သီးကြိုက်တယ်။မေလင်းလင်းက ငှက်ပျောသီး၊
ဖရဲသီး ကြိုက်တယ်။ဟိုတစ်ယောက်ကြိုက်တာ ဒီတစ်ယောက်က မကြိုက်ပြန်ဘူး။
လူရည်လည်တာကျတော့ မေလင်းလင်းက ပိုလည်တယ်။ချက်ဆို နားခွက်မီးတောက်တယ်။အက်ဝင်က
တော့ အရိပ်ပြရင် အကောင်မမြင်ဘူး။တစ်ရက် အမေလုပ်သူက မားမား နေမကောင်းဘူး ပြောလိုက်တာနဲ့
ကိုကိုး Quiet နော်။Don't noisy....မာမား နေမကောင်းဘူးတဲ့။အမေလုပ်သူက အိပ်ယာခင်း ခင်းနေလို့
မွှေ့ယာတွေ မနေရင် သူက မာမား ရလား ရလား တဲ့။(သူ မပေးနိုင်တာကြနေတာပဲ)။သူတစ်ခုခု လုပ်လိုက်
လို့ အမေလုပ်သူ နာသွားရင် သူက မကြာခဏ လာပြိး မာမား နာသေးလားဟင်တဲ့။ဟိုတစ်ယောက်က
တော့ အေးဆေးပဲ။သူ့ကို ဦးတည်ပြီး မပြောရင် ဘာမှမသိသလိုပါပဲ။
တစ်ရက်တော့ အက်ဝင့်ကို စချင်တာနဲ့ (အိမ်ကလူ ခရီးသွားနေတုန်း) သားရယ် မာမား ပါပါးကို လွမ်းလိုက်
တာဆိုပီး ငိုချင်ယောင်ဆောင်ပြလိုက်တော့ အခန်ပြင်ထွက်ပြီး သူ့ပါပါးကိုရှာတယ်။မတွေ့တော့ တံခါးဝမှာ
ရပ်ပြီး မာမား don't sad...just happy...Daddy will come back soon ဆိုပြီး အမေလုပ်သူကို နှစ်သိမ့်ရှာ
ပါတယ်။သူကတော့ စိတ်မကောက်တတ်ဘူး။ဒါပမယ့် ၀မ်းနည်းတတ်တယ်။အခုလည်း ဒီအပတ်နောက်ဆုံး
ကြာသပတေးနေ့ ကျောင်းတတ်ပြီး ပြန်လာ ကတည်းက မှန်ရှေ့ရပ်ပြီး မာမား Where is Edwin's tooth?
(သူ့ရှေ့သွားက ၂နှစ်ခွဲလောက်က နှုတ်ထားတာလေ) အပေါ် ရှေ့သွားနှုတ်ထားတဲ့နေရာ အလွတ်ကလေး
ကိုပြမေးတယ်။နှုတ်ထားတာကြာပြီ သူသတိထားမိပုံမပေါ်ဘူး။အခုမှ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေက
စသလားမသိဘူး။where edwin dropped my tooth ? တဲ့။နှုတ်ပလိုက်ပြီလေ သားရဲ့ ဒေါက်တာက
သားရဲ့သွားပိုးစားလို့ နှုတ်ပလိုက်တာလေ လို့ ဖြေ လိုက်တယ်။ဒါလဲ တစ်နေကုန်သွားနေရာပြပြီး မေးတယ်။
မေးနေတာ ဘေးကနေကြားရဖန်များလာတော့ နောက်တစ်ခါလဲမေးရော မေလင်းလင်းက ကိုကိုးသွား
ပိုးစားလို့ နှုတ်ပလိုက်ပြီလေ တဲ့(အမေ ကိုယ်စား ၀င်ဖြေပေးတာ)။
Posted by JuneOne at 1:20 AM 8 comments Links to this post
အခု အိမ်က ကလေးတွေ ကျောင်းတစ်ပတ်ပိတ်တော့ ဘယ်သွားရမလဲ ဘယ်ကို ပို့ပေးရမလဲ စဉ်းစားရတာ
အလုပ်တစ်ခု။ဆန်တိုစာဆိုတာလဲ ခြေရာချင်းထပ်ခဲ့ပြီ။အနီးနားက playground တွေကလဲ မိုးရွာလိုက်
နေပူလိုက်ဆိုတော့ လျှောတွေက မခြောက်။အိမ်မှာပဲနေဆိုတော့လဲ အချိန်ကုန် ကွန်ပြူတာ ကြည့်လိုက်၊
ဖုံးဆော့လိုက် နဲ့ သူတို့ကိုကြည့်ရတာ စိတ်ဆင်းရဲတယ်။စဉ်းစားမိတယ် ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆို
ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို မိဘတွေက ဆော့ဖို့ အထူးတလည် စီစဉ်ပေးပါဘူး။ကိုယ့်ဘာ့သာ ကြုံတာဆော့တာ
မှတ်မိသေးတယ်။မိုးရွာတဲ့ရက်တွေဆို အိမ်ထဲမှာ ဖျာလိပ်ထောင်ပီး ဖျာတွေ၊တံခါးတွေ ကြားမှာ တူတူပုန်း
တမ်းဆော့တယ်။စာအုပ်လှန်ပြီး ဂဏန်းတွေ အလိုက် အရုပ်လေးတွေ မှာ ကိုယ်၊လက်၊ခြေထောက် တပ်
တယ်။သူတစ်လှည့် ကိုယ်တစ်လှည့်ပေါ့။ပြီးရင် သေနတ်တပ်...ကျည်ဆန်တပ်ပီး တစ်ဖက်လူရဲ့ အရုပ်ကို
ဒါမှမဟုတ် ဇယ်တောက် တမ်းဆော့တယ်။နဲနဲကြီးလာတော့ တောက်ခုံတောင် တောက်လိုက်သေးတာ။
၈ တန်း၊ကိုးတန်း ရောက်တော့ မိုးရွာပြီဆို ၀တ္ထု စာအုပ် တစ်အုပ်နဲ့ နှပ်တော့တာပေါ့။ကျောင်းတတ်ရင်လဲ
ဆော့သေးတာ။ကျောင်းက သစ်သားခုံတွေမှာ အိမ်ကယူလာတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကိုပွတ်၊ပြီးရင် အဲ့အပေါ်မှာ
စာရွက်က်ို လေးထောင့်(သို့)အ၀ိုင်း ဖြဲပြီး ကပ်၊စာရွက်ပေါ်ကနေ ကော်ပေတံ နဲ့ ဖိပွတ်ပေးရင် စာရွက်က
ခုံမှာကပ်သွားရော။အဲတော့မှ ကျောင်းရှေ့မှာ ပွင့်နေတဲ့ ဒန်းပွင့်လေးတွေ ခူး စောနက စာရွက်ပေါ် အရည်
ညှစ်ချလိုက်တယ်(ထန်းလျှက်ရည် အတုပေါ့)၊ပြီးရင် ဖယောင်းတိုင်ကို ဓားနဲ့ ခြစ်ပြီး အုန်းသီး မှုန့်အတုလုပ်
လိုက်ပြီး ဖြူးလိုက်တယ်။အားလုံးပြီးရင် ကောပေတံလေးနဲ့ စာရွက်ကလေးကို ထိုးထိုးကော်ပြီး မုန့်ရောင်း
တစ်ဗန်း၊နှစ်ဗန်း လင်ဗန်းပြားလဲ ဆော့ပါ့။ ခေါင်းပုတ်တမ်းလဲဆေားတယ်။အဲ ဒိုးဆက် ဆက်တမ်း၊မိုနိုပိုလီ
မကျန်စေရဘူး။Edwin playgroup တတ်တုန်းက ကျောင်းက အောက်က ဒိုးဆက်လို ဘောက်စ်လေးရ
လာလို့ အခု သူတို့မောင်နှမ ကို ဒိုးဆက် ဆက်နည်းသင်ပေးထားတာ မောင်နှမ ၂ယောက် သဘောတွေ
ကျနေတာ။အားရင်း မာမား fruit ဒိုးဆက်ဆော့မယ်ချည်းပဲ။အမေလုပ်သူ မအားသေးရင် ညီမလုပ်သူကို
မေလင်းလင်း ကိုကိုး fruit ဒိုးဆက် ဆော့ပေးမယ်နော် ဆိုပီး ညီမလုပ်သူကို အတင်းခေါ် ဆော့တာပဲ။
တို့ငယ်ငယ်က နွေဖက်ဆို အိမ်အောက်မှာ (နယ်မှာနေတော့ အိမ်တွေက အောက်က ဘုတ်တိုင်နဲ့ဆောက်)
ဆင်းပြီးဆော့တယ်။မုန့်ရောင်းတမ်း၊ထမင်း၊ဟင်းချက်တမ်းပေါ့။အဲ သရက်ပင်က သစ်ရွက်တွေ ခူးလို့မှီရင်
ရှင်ပြုတမ်းဆော့မယ်ဆိုပြီး ခေါင်းပေါင်းတို့၊စလွယ်တို့ ကို သစ်ရွက်နဲ့လုပ်ဆော့သေးတာ။သော်တာဆွေလို
လင်မယားလုပ်တမ်းတော့ မဆော့ခဲ့ပေါင်။ဆရာသော်တာဆွေက သူ့ပါးက ပါးချိုင့်ဟာ သူငယ်ငယ်က
လင်မယားလုပ်တမ်းဆော့တုန်းက ရန်ဖြစ်ပြီး ရလာတာတဲ့(ဖတ်ဖူးတာ)။ဒီအောက်က ပုံလေးကတော့
ဒီမှာ မေလင်းလင်းကို အဲလိုမျိုး သူ့ပါးပါး လုပ်ပေးတာ။ကြည့်ရတာ သူလဲ အဲ့လို ဆော့ပုံပဲ။အုန်းလက်အရွက်
အုန်းလက်အခွံခြောက်တွေ အပင်ပေါ်က ကျရင်လဲ တစ်ယောက်တစ်လှည့် ဆွဲကြေး၊စီးကြေးဆော့ကြတယ်
ဟိုတလောက အိမ်နားက ကစားကွင်းမှာ အုန်းလက်ကြွေတွေ့လို့ သူတို့ပါပါးက ဒီလိုဆော့ရတယ်ဆိုပီး
အောက်က မေလင်းလင်း ကိုင်ထားတဲ့ ပု ဏ္ဏရိတ်ပန်းရဲ့ အသီးလေးတွေဆိုလဲ ငယ်ငယ်က ပန်းသီးဆိုပီး
ခူးစားတယ်။အပွင့်လေးတွေကို ရိုးတံ အဆုံးကနေစုပ်ကြည့်လိုက်ရင် ချိုလို့ တစ်ပွင့်စီ ဖြုတ်စုပ်တယ်။
အိုး ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ တော်တော် ဆော့စ၇ာများတာပဲ။ထုပ်စီးထိုးတာ၊ရုပ်ရှင်ဖွဲ့တာ၊စိန်ပြေးတာ၊
၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေေ၀ ဆော့တာ။ဖန်ခုန်တာ၊သရေကြိုးခုန်၊သရေးကွင်းပစ်...အစုံအစုံ တကယ့်
real world မှာကစားခဲ့တာပဲ...အခုတော့ ကိုယ်ကလဲ အွန်လိုင်းဆိုတဲ့ Virtual world မှာပျော်၊သူတို့
လဲ ဖုန်းတွေ၊ကွန်ပြူတာတွေနဲ့ ဆော့။အိမ်နားက ကစားကွင်းသွား။ဒါပဲရှိတယ်။ကိုယ်တို့လို ဆော့ရအောင်
ကလဲ အမေလုပ်သူ သင်ပေးမှပဲ သူတို့ဆော့ရတော့မယ်။အမေလုပ်သူကလဲ လူကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့
သင်ပေးဖို့ရာ ပျင်းသွားပြီ။အော် ဘ၀ ဘ၀...တစ်ဘ၀ နဲ့ တစ်ဘ၀ အတော်ကွာခြားပါလား....
Posted by JuneOne at 12:35 AM3comments Links to this post